Gudoomiyaha Barlamaanka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi oo kulan heersare ah la yeeshay W Arimaha Dibada Norway | Salaan Media
Gudoomiyaha Barlamaanka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi oo kulan heersare ah la yeeshay W Arimaha Dibada Norway
April 9, 2013 | Published by: admin
Norway,Salaasa,9.4.13 (SM)Gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland ahna Gudoomiyaha xisbiga Waddan Mr. Abdirahman M. Abdilahi Ciro oo kulan heer sare ah la yeeshay wasaarada arrimaha debeda ee Norway maanta oo salaasa ah.
Waxa kulankan ka soo qayb qalay masuuliin fara badan oo uu hogaaminayaan masuulka Arrimaha geeska africa Mr. Jens Mjaugedal iyo Anbassador at Ministy of Foreign Affairs Mr. Kjell Harald Dalen
Waxa masuuliyuuntu ku dheeraadeen amaanta Somaliland ku leedahay nidaamka nabadgelyada iyo geedi socodka demoquraayida ee ay ku dhaaftay wadamo farabadan oo aduunka ka mid ah.
Waxa ay masuuliyuuntu yidhaahdeen Norway waxa ay halkeedii kasii wadaysaa taageeradii dhaqaale ee somaliland siin jiray iyo dhamaan mashaariicda hayadaha Norwagigu ka wadaan Somaliland. Waxaan sheegeen in deeqdaasi si toos ah ugu tegayso Somaliland.
Waxa ay sheegeen in weft uu hogaaminaayo wasiirka deeq bixintu Mr. Heikki Holmås la filaanyo in ay booqasho ku iman doono Somaliland dhawaan, si ay ugala hadlaan madaxweynaha in saaxiibtinimada Somaliland iyo Norway marwalba si toos ah u socon doono iyo sidii Norway u sii kordhin lahayd mashaariica horumarinta iyo caawimooyinka dhaqaale ee ay ugu talo gashay Somaliland
Waxa ay masuuliyiintu kula talianynaa Somaliland in ay ka faa’iidaysto khairaadkeeda ilahay ku manaystay. Waxa ay yidhaahdeen waa muhimin in Somaliland culays saarto si ay ula soo bixi lahayd barool kaas oo u furi doona ila dhaqaale oo aad u muhim ah.
Waxa kale oo ay masuuliyiintu soo jeediyeen talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan sidii Somaliland u heli lahayd saaxiibo badan oo taageera qadiyada Somaliland.
Waxa kale oo ay Somaliland ku dhiiri geliyeen in ay ka qayb galaan shirka Turigu ugu yeedhay ee in ay Somaliland iyo Somalia ku wada hadlaan. Waxa ay yedhaahdeen dan baa ugu jirta Somaliland i ay u sheegaan Somalia, Turikigaba iyo caalamka kaleba in Somaliland jiraankeedu yahay «Muqadas» oo aanu marnaba gorgortan geli karin, bale in Somaliland u diyaar tahay inay wada hadalka la sii wado wadanka jiiranka ah ee Somalia. Waxa ay intaas ku dareen in haatan imika aduunku fahmay in Somaliland ay diyaar u ahay in ay siyaasad la qaybsato Somalia.
Waxa masuuliyiintu yidhaahdeen waxa aanu ku rajo waynahay in wadama jiraanka ahi mustaqablka ku daydaan horumarka nabad gelyada iyo guulaha Somaliland gaadhay.
Dhinaca kale waxa gudoomiyaha golaha wakiiladu siiyey dowlada Norway xog waran dhinacyo badan taabanaaya.
Waxaanu ku dhiiri geliyey in Norway ay taageeraan qadiyada Somaliland isla markaasna ilaaliso saaxiibtinimada dheer ee ka dhexaysa Norway iyo Somaliland.
Waxa uu gudoomiyahu dalkiisa ku soo gebo gebeeyey in uu soo dhawaynaayo weftig Norwayjiga ah ee imanaysa Somaliland mustaqbalka dhow.
Ugu danbayntiina aad buu ug mahadnaqay caamida dhaqaale ay Norway Somaliland ugu balan qaaday.